I-B&B Prairerhof esebenzayo - I-Airbnb
I-B&B Prairerhof esebenzayo
Schenna, Trentino-South Tyrol, i-Italy
U-Thomas unokuphawula okungu-67 kwezinye izindawo.
I-Prairerhof iyipulazi le-B&B lendabuko, elilawulwa umndeni elisegqumeni elihle e-Schenna, ngaphezu kwedolobha lase-spa laseMerano. Jabulela amathuba amaningi okuqwala izintaba ngokuqondile usuka epulazini. Kukhona futhi ichibi langaphandle lesizini kanye ne-whirlpool eshisayo yonyaka wonke (37.5 °) enombono omuhle wesifunda saseMerano nezintaba ezizungezile.
Lapha amakamelo anikezwa ngokukhululekile, ungenza ukukhetha kwakho ngqo kuwebhusayithi yethu. "Prairerhof"
I-Actibe B&B Prairerhof inamagumbi ayisishiyagalolunye aphindwe kabili namabili angawodwa anamagumbi okugeza angasese ngesitayela sesintu saseTyrolean. Amakamelo ane-balcony enombono we-panoramic, indawo yokuhlala, ishawa, indlu yangasese, i-WiFi yamahhala, ne-TV yesathelayithi. Igumbi lethu lesidlo sasekuseni lendabuko laseTyrolean elinomshini wekhofi ozenzakalelayo we-WMF, isiqandisi nemikhiqizo eminingi yesifunda nayo iyatholakala kuwe nganoma yisiphi isikhathi.
INDAWO YECHIBI LOKUBHESHA
Ichibi lethu lokubhukuda elingaphandle elenziwe nge-Quarzid Verde elinendawo evulekile yokushiswa yilanga, umbhede onamaphosta amane, izindawo zokubeka ilanga namapharasoli kanye nombono ohlukile we-panoramic uyatholakala kuwe ngezikhathi ezithile zonyaka. Endaweni yokubhukuda uzophinde uthole incwadi nekhona lemidlalo okuhlanganisa nodonga lwemicibisholo oluchwepheshile.
I-whirlpool ikulindile phakathi nensimu yezithelo.
Ngakho-ke jabulela ukugeza okuphumulele okufudumele okunamajethi okumasaji apholile nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ushumekwe maphakathi nensimu yezithelo, ungajabulela ukubuka kwepanoramic okungu-180 ° phezu kwesigodi sesigodi saseMerano nezintaba ezizungezile.
Isidlo sasekuseni esicebile esinemikhiqizo yesifunda ekhethiwe ikulindile.
Amakamelo anikezwa ngokuzenzakalelayo lapho kubhukha, lapho kungena khona wonke amagumbi anemibhede emithathu kuqala. Sesha futhi usibhalele ukuze sikwazi ukukunikeza ukunikezwa okungcono kakhulu.
Sikuvulele unyaka wonke.
Umasipala wase-Schenna ukhokhisa intela yesivakashi engu-€ 1.25 umuntu ngamunye ngobusuku ngendawo yokuhlala yezivakashi, engakhokhwa kuphela ngokheshi esizeni.
Lapha amakamelo anikezwa ngokukhululekile, ungenza uk…
ubusuku obungu-7 e- Schenna
- indawo emaphakathi kodwa ethule
- 5 km ukusuka endaweni yokushushuluza nezintaba iMerano 2000
- Imizuzu emi-5 ukuya enkabeni yeSchenna, esitolo esikhulu
- Kukhona izindawo zokudlela ezinhle namabha eduze
- Inethiwekhi yokuhamba ngezinyawo engaphezu kuka-500 km ikulindile esizeni, eSchenna kuphela!
- Ukusuka ekuqwaleni izintaba kuya ezindleleni zokuhamba, wonke umuntu uzothola okuthile lapha!
Uzothola izeluleko zethu zangaphakathi zomuntu siqu esizeni!
I am living in South Tyrol, in the little town Schenna/Scena since I was born. I really like the place, the landscape, the people, the food - but I am lookin…
Mina nogogo wami (Thomas) siqhuba i-Active B&B Prairerhof ndawonye. Ugogo wami naye uhlala endlini yasepulazini futhi uyakwamukela mathupha lapho ufika. Ngitholakala njalo ekuseni ngokwami futhi nganoma isiphi isikhathi ngocingo noma nge-WhatsApp ukuze ngithole amathiphu nemibuzo.
Singajabula ukuhlela isimiso sakho sansuku zonke ndawonye.
Mina nogogo wami (Thomas) siqhuba i-Active B&B Prairerhof ndawonye. Ugogo wami naye uhlala endlini yasepulazini futhi uyakwamukela mathupha lapho ufika. Ngitholakala njalo ekuseni…
Hlola ezinye izinketho ezise- Schenna namaphethelo